Ubuntu 20.04.2 LTS inouya neKernel 5.4, grafiki stack yekuvandudza uye zvimwe | Kubva kuLinux
Ubuntu 20.04.2 LTS inouya neKernel 5.4, grafiki stack yekuvandudza, uye nezvimwe
Mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweyechipiri yekuvandudza poindi yeUbuntu 20.04.2 yakaziviswa LTS, ndeipi inosanganisira shanduko dzakanangana nekuvandudzwa kwesoftware, Linux kernel uye graph stack stack inogadziridza, inosimudza uye bootloader bug fixes.
Iyo zvakare inosanganisira yekuvandudzwa kwazvino kwemazana mazana emapakeji kugadzirisa kusagadzikana uye kugadzikana nyaya, pamwe nezvimwe zvakagadziriswa zviri kuburitswa panguva imwechete yeUbuntu Budgie 20.04.2 LTS, Kubuntu 20.04.2 LTS, Ubuntu MATE 20.04.2 LTS, Ubuntu Studio 20.04.2 LTS, Lubuntu 20.04.2. 20.04.2 LTS , Ubuntu Kylin 20.04.2 LTS uye Xubuntu XNUMX LTS.
Tinofanira kurangarira izvozvo Shanduro dzeLTS dzinoshandiswa seyakaenderera yekuvandudza modhi yekutsigira kuendesa kernel nyowani uye mifananidzo yemavara, umo mafaera akadzoserwa uye madhiraivha anozotsigirwa chete kudzamara rinotevera Ubuntu LTS bazi chigadziriso.
Ubuntu 20.04 LTS yaive yakaburitswa kuburitswa inosanganisira iyo Linux 5.4 kernel, vhezheni yaive nenhau zhinji dzakakosha uye maficha uye pakati pezvakanyanya kukosha yaive rutsigiro rwehurefu hwakawanda hwehardware (senge AMDNavi 12 uye 14 GPUs) uye exFAT faira system, semuenzaniso.
Kunyangwe mune iyo nyowani nyowani, iyo Linux 5.8 kernel yakafemerwa uye ichatsigirwa kusvika Ubuntu 20.04.3, iyo ichapa iyo Ubuntu 21.04 kernel. Pakutanga kutumirwa, hwaro 5.4 kernel inotsigirwa kweiyo yakazara-makore mashanu ekuchengetedza kutenderera.
Imwe yeshanduko idzo dzakabuda muUbuntu 20.04 LTS yaive iyo rwenharaunda rutsigiro rweWireGuard, Nekudaro, iyi vhezheni yeKernel 5.4 haina kuisanganisira sechinhu, asi yaive kusvika Kernel 5.6, WireGuard inogona kuverengerwa mune iyi vhezheni yeKernel. WireGuard ndeimwe yeanonyatso kuzivikanwa open source mhinduro dzekumisikidza kwakachengeteka kubatana pasi peVPN.
Nezve desktop desktop yemamiriro, tinogona kuwana Gnome 3.36 izvo zvinounza ne a dhizaini nyowani yekushandisa dhairekitori uye system menyu.
1 Nezve nyowani Ubuntu 20.04.2 LTS inogadziridza
1.1 Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani Ubuntu 20.04.2 LTS kugadzirisa?
Nezve nyowani Ubuntu 20.04.2 LTS inogadziridza
Iyi vhezheni inosanganisira kumwe kuvandudzwa kweiyo Ubuntu 20.10 vhezheni yatakatotaura nezvayo imwe, iri yakatsanangurwa package package ne kernel vhezheni 5.8 (kernel 5.4 yakashandiswa muUbuntu 20.04 uye 20.04.1).
Nezve izvo zvikamu zve grafiki stack, tinogona kuona kuti mazhinji akagadziridzwa, kusanganisira X.Org Server 1.20.9, libdrm 2.4.102 uye Mesa 20.2.6, iyo yakaedzwa mukudonha kuburitswa kweUbuntu 20.10. Shanduro nyowani dzevatyairi vhidhiyo dzakawedzerwa kune Intel, AMD uye NVIDIA machipisi.
Kusiyana neshanduro dzekare dzeLTS, vhezheni nyowani dzekernel uye giraidhi yemapikicha ichashandiswa nekumisikidza munzvimbo dziripo dzeUbuntu Desktop 20.04, pane kupihwa senzira.
Iyo yekuvandudza kweshanduro dzakagadziridzwa dzemapakeji zvakare yakasimbiswa GNOME 3.36.8, LibreOffice 6.4.5, libfprint 1.90.2, snapd 2.46, ceph 15.2.7.
Kune maseva masystem, kernel nyowani inowedzerwa sechisarudzo mune inoisa, uyezve zvine musoro kushandisa magungano matsva kungoisa matsva - masisitimu akaiswa kare anogona kugamuchira shanduko dzese dziri muUbuntu 20.04.2 kuburikidza neyakajairika yekumisikidza yekumisikidza system.
Vashandisi vekare LTS bazi reUbuntu 18.04 vanozoziviswa mune yekuvandudza yekumisikidza maneja kuti ivo vanogona otomatiki kuchinjira kune 20.04.2 bazi.
Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani Ubuntu 20.04.2 LTS kugadzirisa?
Kune avo vanofarira uye vari paUbuntu 20.04 LTS, vanogona kugadzirisa yavo system kune iyo nyowani yekuburitsa yakaburitswa nekutevera iyi mirairo.
Kana ivo vari vashandisi veUbuntu Desktop, ingovhura terminal pane iyo system (vanogona kuzviita neiyo nzira pfupi Ctrl + Alt + T) uye mairi vanozonyora unotevera kuraira.
Pakupera kwekurodha pasi uye kuisirwa mapakeji ese, kunyangwe zvisiri zvakafanira, tinokurudzira kuitisa komputa kutangazve.
Zvino kune avo vari Ubuntu server vashandisi, iwo iwo iwo murairo wavanofanira kunyora ndiwo unotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu 20.04.2 LTS inouya neKernel 5.4, grafiki stack yekuvandudza, uye nezvimwe
Canonical inoshanda pane nyowani yekumisikidza yeUbuntu uyezve inotaura zvakanaka kuna Martin Wimpress
spaCy, raibhurari yekugadzirisa mutauro raibhurari